Kuzasi kwangu kwaigara kwakanyorova, zvandakazoitwa nemwana wechikoro mucombi! - Nhau Dzevakuru
Kuzasi kwangu kwaigara kwakanyorova, zvandakazoitwa nemwana wechikoro mucombi!. Wainge uri musi weFriday makuseni ndakananga kubasa, combi yandainge ndiri makakwira mumwe mukomana atori mu uniform ndokubva agara paside pangu ndokundimhoresa achisekerera. Ndakaramba ndakamutarisa ndichizvibvunza kuti kamwana aka kari kudei kwandiri. Mukomana uyu akatanga kuswedera kwandiri ndokubva ati ayida kuzondiendesa out obva azondiratidza good time.
Ndakatanga kuseka ndikamuti chii chaundiite iwewe kamwana kadiki so, achibva ati babe ndipe number yako ndigokuratidza , achiseka hake apa ainge ane confidence yekuti wainzwa kuti arikurevesa zvaaitaura. Ndakanakirwa nemwana uyo nezvaitaura ndichabva ndati ko ukatadza kuyita zvauri kutaura, ndokubva apindura kuti aahh ndizvo zvandakazvarirwa izvi option yekutadza haipo.
Ndakayenda kubasa ndikaswera ndichifunga mwana uyo ndipo paakandirova nesurprise akatumira text zvichinzi I miss you already. Eish masasi eharare ndakawedzera kufunga mwana uyo apa ndichinzwa kuzasi keangu kuchivhita vhita nekunyorova at the same time. Ndakamupindura ndikati wandiitei akabva ati hanti ndakuudzai kuti zvandinokuitai hamuzoda kuona mumwe murume futi kana ndapedza nemi. Mukomana uyu anogara achinditumira mamessage anondipa kuti ndinyorove kuzasi kwangu but I am afraid kuti ndimuone coz ndotya kuzonzi ndaita [email protected]
Kuzasi kwangu kwaigara kwakanyorova
Previous article5 Different Types of Women pakusvirana muZimbabwe
Next articleNdakasvirwa nemurume wemunhu ndikaita kunge beche richabvaruka